Nkesa Linux Linux 5 inye ndị komputa gị obere ego | Site na Linux
Si ị nwere kọmputa ochie na ị debere n'akụkụ n'akụkụ ma ọ bụ chefuo ebe ọ bụla n'ụlọ gị, ka m gwa gi na inwere ike kpochapu ya ma nye onye a ndu ohuru.
Ọfọn, ekele maka ọtụtụ nkesa Linux dị iche iche dị, enwere m ike ịgwa gị nke ahụ enwere ndị nkesa na-agbadoro iji gbuo na kọmpụta dị ala na iji otu n’ime ndị a ị nwere ike inye kọmputa gị ohere nke abụọ.
Ekwesịrị m ịkọwa na nke a bụ mkpokọta ụfọdụ n'ime ha, yabụ ọ bụrụ na ekwughị m onye ọ bụla amaara, ịnwere ike ịkekọrịta anyị na nkọwa.
3 Linux Puppy
4 Damn obere Linux
AntiX bụ nkesa na-akpali nnọọ mmasị, ike nke na-agba ọsọ site na PII na 64MB RAM. Dabere na mgbasa ozi Debian Linux ama ama, AntiX nwere ike ịkwado arụmọrụ kachasị mma ma na-enyekwa otu ngwaọrụ dị mkpa,
Ihe kacha dị mkpa:
CPU: Intel PII ma ọ bụ karịa
Ram: 64 MB ma ọ bụ karịa
HDD: 2G ma ọ bụ karịa
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ibudata nkesa Linux a, ịnwere ike ịga na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị ya yana na ngalaba nbudata ị nwere ike nweta onyonyo sistemụ. Njikọ bụ nke a.
Obere Core bụ otu n'ime nkesa Linux kacha nta Ọ na-eweta ngwa ndị dị mkpa maka isi ọrụ nke usoro. Obere Linux Ezubere iji na-agba ọsọ site na RAM, nke na-eme nkesa a dị mma maka ndị otu obere akụ.
Core Tiny bụ maka 32-bit na 64-bit ụkpụrụ ụlọ. Latestdị Tiny Core kachasị ọhụrụ bụ naanị 16MB.
CPU: Intel i486 ma ọ bụ ka mma
Ram: 16 MB ma ọ bụ karịa
HDD: 2GB ma ọ bụ karịa (ọ bụrụ na arụnyere)
Ọ bụrụ na ịchọrọ ibudata nkesa Linux a ị nwere ike ịga na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị ya na ngalaba nbudata ị nwere ike nweta onyonyo nke sistemụ ahụ. Njikọ bụ nke a.
Linux Puppy ọ bụ obere nkesa Linux mana oke zuru ezu na n’elu ihe nile di ike nke-uku. Ọ bụ nkesa na-enye ha ohere ime PC ọ bụla ka ọ bụrụ otu igwe, dị oke ọsọ ma dịkwa nchebe.
Puppy Linux bụ nkesa nke Barry Kauler mepụtara na Ọ bụ nhọrọ magburu onwe ya maka ndị otu obere ego gị.
Nke a Linux nkesa ọ na-agba ọsọ na igwe ọ bụla ma nwee usoro nke ngwa arụnyere na sistemụ njikwa yana ngwa ọrụ nke ya.
CPU: 333MHz ma ọ bụ karịa
HDD: 5GB ma ọ bụ karịa
Damn obere Linux
Maka ndị na-amaghị, Damn Small Linux Ọ bụ nkesa Linux, nke nwere naanị 50 MB nke ebe nchekwa RAM nwere ike gbue, Nkesa a dabere na nkesa Debian Linux.
Nkesa a bụ nwere ike mfe gburu site pendrive na-enweghị na-arụ echichi na ọbụna ọ bụ nkesa dị oke mma maka ịkọwapụta ikike enyere ala ya.
Damn obere Linux Ọ bụ nhọrọ magburu onwe ya maka ndị otu nwere obere ego.
Ram: 50 MB ma ọ bụ karịa
HDD: 2 GB ma ọ bụ karịa ma ọ bụrụ na ịwụnye
Nke a bụ nkesa Linux, kesara na LiveCD ma obu Live USB, na usoro .iso ọ naanị bi 35 MB. SliTaz na-enye zuru ezu gburugburu ebe obibi na arụ ọrụ nke ukwuu, dabere na ya LXDE na Openbox.
A tọhapụrụ ụdị nke siri ike nke SliTaz naanị izu ole na ole gara aga, ka ọ dị oke ọnụ ahịa na July 2018.
Ram: 24 MB ma ọ bụ karịa
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » 5 Linux nkesa na-eku ume ndụ ọhụrụ gị PC ala-ego
Esi m n’obodo dị anya, na-achọ iji nwetaghachi ihe CrunchBang Linux bụbu, ọkachasị nkà ihe ọmụma ya, ma ugbu a ọ bụ oge iji nwalee nnyefe ndị a.
Ogbe 16 dijo
Ndewo ebe nrụọrụ weebụ
ero ero echiche ero ero usoro ero ogologo agwaetiti ero ero romance
Crunchbang ka na-arụ ọrụ nke ọma mana nsogbu m na-ahụ na nkesa ọkụ ndị a niile bụ na ị ga-akwụsị na nbudata ọba akwụkwọ maka ngwa ndị ebughị maka nkesa dị fechaa.
M, kama ichegbu onwe m banyere ịwụnye nkesa ọkụ, ana m agbalị ịchọpụta onye n'ime ha nwere ngwa kachasị emegharị
anya cuban dijo
@AMEM: Obi dịkwa m ụtọ na Crunchbang (Wheezy), nke kachasị nso m chọtara, dị na ndụ Debian: Devuan, mana ọ bụ na ihe ngosipụta: Good Life Linux, ihe na-erughị 100 mb, yana Openbox na buut (ọ na-ewe obere sekọnd iji malite sistemụ, nke a bụ n'ihi enweghị Systemd dị ka init). Ma nwalee nke ọ bụla sitere na ya ma ọ bụ Devuan n'onwe ya, ị gaghị akwa ụta ya: https://devuan.org/os/partners/devuan-distros
Ewoo! na dị ka data agba, enwere ihe akpọrọ Crunkbong, ọ na-ada ka ọ maara? Agbabeghị m ya 🙁 ya mere enweghị m ike ikwu okwu.
Ndị Kraịst dijo
Ezi ụtụtụ, ịwụnye distros ndị a na-adọrọ mmasị, mana mgbe ị na-etinye akụkụ dị iche iche, ọ na-ebili maka nsogbu m (enwere ike imeri ya site na nyocha) ma ọ bụrụ na m chọrọ ịnye ntinye m ngwaọrụ maka ebe ọrụ dị ka isi nke ire ere ... wụnye a tiketera onye nbipute, onye na-agụ barcode, ihuenyo mmetụ ma si otú a nyekwuo uru maka ntinye linux m na-agba Ubuntu 16.04.5 na Atom N270 1.6. Mem 1gb dị nwayọ nwayọ mana ugbu a ọ bụ nke na-enye m nhọrọ ndị ọzọ mgbe m na-achọ ihe ngwọta iji wụnye akụkụ. Daalụ
Ọ bụrụ na Ubuntu na-arụrụ gị ọrụ na ịchọrọ ihe dị mfe, mana ejiri nlezianya lekọta ya ma dakọtara, Lubuntu nwere ike ịbụ nhọrọ dị mma.
Ebumnuche ndị a maka ndị okenye PC (ana m akwado Puppy na nke a), ọ bụghị maka akụrụngwa nke oge a nwere atụmatụ ole na ole: gbalịa Xubuntu ma ọ bụ Lubuntu.
Onye nrụpụta Gravit: Ngwá Ọrụ Kere Ọkpụkpụ Cross-Platform Kachasị Mma